58 no marary Mitombo isa ny Malagasy voan’ny Coronavirus
Olona 4 vaovao no voamarina fa voan’ny Covid-19 omaly atoandro, ka 54 ny isan’ny rehetra voa teo.
Tsy nivoaka teto ireo fa olona nifanerasera akaiky tamina olona nitondra ny tsimok’’aretina ; nahazo tamin’ilay vazaha mpizahatany tonga izay efa namindra tamina olona roa, dia ny mpamily sy ny mpiseradia nitarika azy izy ireo, raha ny fanazavan’ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle. Nifampitakosona tamin’ireo olona efa namindran’ilay vazaha izany izy efatra ireo. Nisy fitadiavana ireo olona nifampitakosona tamin’ireo voa, ka nahitana azy ireo. Malagasy avokoa ireo ka iray no vehivavy, 34 monina eto Antananarivo, ny faharoa 13 taona eto Antananarivo, ny fahatelo 49 taona mbola eto Antananarivo ihany koa, ary ny iray fahaefatra dia 30 tany Toamasina, ary efa nampidirina ao amin’ny CHU Morafeno. Ireo tranga voamarina ireo, dia tsisy soritr’aretina ivelany ny 3. Ilay any Toamasina no manavy sy mikohaka. Samy arahi-maso andro aman’alina izy ireo. Tsy misy atahorana ny fahasalamany. 6 ny tranga azo tamin’ny fifampikasohana amin’izao, hoy izy ny atoandro. Nilaza kosa ny Filoham-pirenena omaly hariva, fa raha natao ny TDR (Test de Diagnostique Rapide) dia teo amin’ny mpandeha 925 avy any ivelany no vita omaly, raha 2500 tao anatin’ny roa andro. 4 tamin’ireo “positif” ny valiny. Ny 2 tamin’ireo voa dia mpivady 66 sy 67 taona. Ny faharoa nandeha tamin’ny AF934 avy any Frantsa 54 taona sy 47 taona vehivavy. 315 ny teny amin’ny Jumbo Score izay “negatif” avokoa. Avy any Kenya, Maorisy, La Réunion ireo. Ireo teny amin’ny CCI, dia saika ireo avy amin’ny Air France. 58 ny olona mitondra ny Covid19 eto Madagasikara amin’izao, hoy ny Filoham-pirenena.
TRANGA MARO MAMPANAHY
Nisy vazaha iray nitondra ny tsimok’aretina izy tany Frantsa izay hafa mihitsy fa tsy ilay mpizaha tany efa nitety faritra. Mbola tsy sempotra , mbola tsy narary. Nankeny Isotry nitady ravintsara ity vazaha ity mba hitsabony tena, ary avy hatrany dia namindra tamin’ilay mpivarotra .Narary io lehilahy mpivarotra io, nanomboka hita taratra satria nikohaka, sempotsepotra,… Niitatra ihany ny raharaha ka nojerena indray izay nifampikasoka taminy. Isan’izany ny tovolahy kely 13 taona, izay voamarina fa voan’ny coronavirus ihany koa.Ankoatr’izay nisy vazaha iray mpiasan’Ambatovy tratran’ilay aretina, natao test izy dia nivaly ny fitilian’ny IPM, ka voamarina fa voa. Nisy olona roa hafa nifanerasera taminy tratra ihany koa. Fa ny talata lasa teo dia nisy tovovavy nifampitadiavana,araka ny fanazavan’ny filoham-pirenena. Naao fitiliana izy io ka “positif” , asa na menatra na natahotra fa tonga dia nirifatra nitsoaka ka nifampitadiavana erak’Antananarivo. Mandeha ny fanadihadiana satria mety efa nifanerasera taman’olona tany izy.Manomboka anio kosa dia hijery ny orinasa eto Madagasikara, izay afaka manjaitra aro vava ny fitondram-panjakana. Hovatsiana izany ny isan-tokantrano.